Itoobiya oo Bayaamisay Siyaasadeedda Biyo-xidheenka ay Masaaridu ka Didey | Salaan Media
Itoobiya oo Bayaamisay Siyaasadeedda Biyo-xidheenka ay Masaaridu ka Didey
Addis Ababa(SM)- Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa ka hadashay siyaasadeeda la xidhiidha biyo-xidheenka ay ka leexinayso biyaha ku shubma webiga Niilka ee mara Suudaan iyo Masar iyo dareenka didmada ah ee ay ka bixisey Masar.
War uu soo saaray afhayeenka wasaaraddaasi shantii Juun ayaa lagu caddeeyay inay Itoobiya ku sii dhegganaanayso siyaasadeedii arrimaha dibadda ee is qaddarinta iyo wax wada qabsiga jaararkeeda ee ay ku soo dhaqmaysay tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Warkaasi ka soo baxay afhayeenka arrimaha dibadda Itoobiya oo ay baahisey wakaalada wararka WIC, waxa uu u qoraa sidan; “War ka soo baxay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Juun 5 ayaa soo hoosta ka xarriiqay inay Itoobiya ku sii taagnaanayso siyaasadeedii kor u qaadista arrimaha dibadda ee ku salaysnayd istixgelinta iyo ka wada faa’iidaysiga jaararkeeda oo dhan ee labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Iyada oo ka duulaysa siyaasaddani, waxa ay Itoobiya qaaday tallaabo lagu abuurayo guddi khubaro caalami ah oo ay weheliyaan Masar iyo Suudaan oo awood loo siiyay inay soo baadhaan in uu wax dhaawac ah oo weyni uga imanayo dhaamka weyn ee Itoobiya ka duwayso biyaha laagta ku darsanta webiga Niilka labada dal ee ay biyahaasi sii maraan.
Tallaabadan ayaa looga dan lahaa in ay meesha ka saarto wixii is aamin darro ah ee ay Masaaridu ka qabto dhaamka.
Markii ay soo baxday warbixinta khubaradaas oo xaqiijisay in aanu biyo xidhkaasi wax dhibaato ah u lahayn biyaha u socda dalalkaasi, ayaa dhawr siyaasiyiinta Masaarida ah waxa ka soo yeedhay hadallo aan la aqbali karin oo keenaya isku dhac, oo ay ku handideen xidhiidhka wanaagsan ee labada dal.”
“Dawladda iyo dadka Itoobiya, waxa ay si aad ah uga xumaadeen hadalladaasi masuuliyad darrada ah.
Dawladda Itoobiya waxa ay dooratay in ay dulqaad ka lahaato hadalladaasi, balse dacaayadda aan macnaha ku fadhiyin ee ka dhanka ah Itoobiya waa ay sii socotay.
“Safiirka Masar ay ku leedahay Itoobiya waxa looga yeedhay Arbacadii, Juun 5, 2013, wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana la weydiistay inuu sharraxaad ka bixiyo mowqifka dawladdiisu ka taagan tahay arrintani. Waxaanay wasaaraddu waqtigani sugaysaa jawaabtiisa.
Wax kasta oo dhacayba, Itoobiya waxa ay sii wadi doontaa inay ka shaqayso sidii ay xidhiidh xooggan ula yeelan lahayd dalalka saaxiibada iyo jaarkaba ah si ay ugu hesho miidaan wax ku ool ah dagaalkeeda ka dhanka ah cadawgeeda ugu weyn ee ah saboolnimada.
Arrintaasi darteed, Itoobiya waxa ay sii wadaysaa inay wax wada qabsadaan Masaarida.Itoobiya waxa ay xasuusinaysaa cid kasta oo danaynaysa in dhismaha biyo xidheenka GERD ay hubaashii uga faa’idi doonaan Masar iyo Suudaan kolba sida ay uga qayb qaataan horumarka Itoobiya iyo gobolka”.